Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, January 16, 2011 Sunday, January 16, 2011 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
ကျွန်တော်ဟာ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ စီနီယာ မန်နေဂျာ ရာထူးနဲ့အတူ ကောင်းမွန်တဲ့လစာ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်အေးချမ်းစွာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်.. အပူအပင်သိပ်မရှိဘဲ သက်သောင့် သက်သာနဲ့ ဘ၀ကို ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ၀ယ်ထားတာ ၂လဘဲ ရှိသေးတဲ့ အသစ်စက်စက် ပြောင်လက်နေတဲ့ အနက်ရောင် ဂျာဂွာကားသစ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတိုင်ကျကျနဲ့ သပ်ရပ် ကြော့မော့နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အရာရာ အဆင်ကိုပြေနေတော့တာပါဘဲ။ ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းရင်း အိမ်နဲ့ကုမ္ပဏီ သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့ဘ၀လေးကို ကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်…
တစ်နေ့ ကျွန်တော် အလုပ်တွေပြီးတော့ ကုမ္ပဏီကနေ အိမ်အပြန် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကားသစ်လေးနဲ့ မြို့ပြင်ဘက်ကို အပျင်းပြေ ကားမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်.. အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကားကိုမောင်းနေရင်း မျက်လုံးကိုလည်း လျှင်လျှင် ထားရပါသေးတယ်.. ကားလမ်းမပေါ် ကလေးတွေ ရုတ်တရက် ဖြတ်ပြေးတာမျိုး၊ လမ်းကွေ့ကနေ ကားတွေ ချိုးကွေ့ထွက်လာတာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးတာကြောင့်ပါ။ အရှိန်နဲ့ မောင်းနေရင်း ရှေ့နားမှာ Slow Down အချက်ပြတစ်ခုကို တွေ့လိုက်တာမို့ ကားကို အရှိန် လျော့လိုက်ပါတယ်.. အဲဒီမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော့်ကားမှန်ကို တစ်စုံတစ်ခု လာရောက်ထိမှန်သံ ကြားလိုက်ရပါတယ်.. လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ခန်းထဲမှာ အုတ်ခဲကျိုး တစ်ခုက ရောက်နေခဲ့ပြီ။ ဘုရားရေ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ တောက်ပ ပြောင်လက်နေတဲ့ ဂျာဂွာကားမှန်အသစ်ဟာ ကွဲသွားပါရောလား…
ကျွန်တော် ကားဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းပစ်လိုက်ပြီး တာယာကို အသံမြည်အောင် ကားကို ဆွဲကွေ့ပစ်ကာ ကျွန်တော့်ကားကို ခဲနဲ့ ပေါက်လိုက်တဲ့သူကို အပူတပြင်း လိုက်ရှာပါတယ်…. အုတ်ခဲနဲ့ ပေါက်လိုက်တဲ့ သူကိုလည်း တွေ့ရော ကားကို ထိုးရပ်လိုက်ပြီး ကားအပြင်ဘက်ကို ထွက်ကာ ဒေါသတကြီး ကားတံခါးကို ဆောင့်ပိတ်လိုက် ပါတယ်.. တကယ်တော့ ကျွန်တော့်ကားကို ခဲနဲ့ ပေါက်လိုက်တဲ့သူဟာ အလွန်ဆုံးရှိမှ အသက် ၁၂နှစ်လောက်ဘဲ ရှိဦးမှာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ အင်္ကျီရင်ဘတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပစ်လိုက်ပြီး လက်သီးနဲ့တစ်ချက် ထိုးချလိုက်ပြီးတဲ့နောက် မြေပြင်ပေါ်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်ပါတယ်..
“ ပြောစမ်း.. မင်းဘယ်သူလဲ.. မင်းက ဘယ်လောက်သတ္တိရှိလို့ ငါ့ကားကို ခဲနဲ့ပေါက်ရတာလဲ… မင်း ဒီလိုဘဲ သူများတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ကလေးလား.. အခု မင်းအုတ်ခဲနဲ့ထုလိုက်လို့ ငါ့ကားမှန်ကွဲသွားပြီ.. ဒီကားမှန် တစ်ချပ် ဘယ်လောက်တန်တယ်ဆိုတာ မင်းသိရဲ့လား.. ဟင်… မင်း လျော်နိုင်လို့လား.. ပြောစမ်း.. ငတုံးရဲ့”
“ကျ.. ကျ.. ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ… ခဏလောက် ကျွန်တော် ပြောတာ နားထောင်ပေးပါခင်ဗျာ. ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် မဖြစ်လို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ကားတွေတားတာ ဘယ်ကားမှ ရပ်မပေးကြလို့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိတော့တာကြောင့် ခုလို လုပ်လိုက်မိတာပါ။ ”
ကျွန်တော်ရဲ့ ဒေါသတွေနဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ အမေးကို မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေတဲ့ ကောင်လေးက တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစွာ ဖြေနေပါတယ်. သူ့ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာလည်း မျက်ရည်တွေက စီးကျလို့ လူတစ်ကိုယ်လုံးလဲ တုန်ရီနေခဲ့ပါတယ်.. ပြီးတော့ တစ်နေရာကို လက်ညိုးညွှန်လိုက်ပြီး “ဟိုမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်ကိုပါ.. သူ့ရဲ့ ၀ီးချဲဟာ ဒီလမ်းပေါ်ကနေ ကျော်ပြီး ကုန်းအဆင်းလေးကို အရှိန်နဲ့ လိမ့်ဆင်းသွားပြီး မှောက်သွားပါတယ်.. နဂိုကလည်း လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူး.. အခုလည်း သူ့မှာ ဒဏ်ရာ ရထားပါတယ်.. သူ့ကိုယ်က သိပ်လေးတော့ ၀ီးချဲပေါ် ပြန်တင်ဖို့ ကျွန်တော် မနိုင်ဘူး ပြီးတော့လဲ ဒီနေရာကို ရောက်အောင်ဝီးချဲကို ပြန်တွန်းတက်လာဖို့လည်း မနိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ.. ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့အစ်ကိုကို ၀ီးချဲဆီ ပြန်တင်ပေးပါလား ခင်ဗျာ.. အစ်ကိုကြီးရယ် ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ”
ငိုရှိုက်ရင်းပြောနေတဲ့ ကလေးရဲ့ အသံနဲ့ တုန်ရီနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလေးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ကြမ်းရိုင်းနေတဲ့ ဒေါသမုန်တိုင်းတွေကို လွှင့်ပါးသွားစေခဲ့တယ်.. ကျွန်တော်မှားသွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်အမှားအတွက် လည်ပင်းထဲမှာ အလုံးကြီးတစ်လုံးက လာဆို့နေသလို ခံစားရပြီး တံတွေးကိုတောင် ခက်ခက်ခဲခဲ မြိုချလိုက်ရပါတယ်.. ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာနဲ့ဘဲ မေးမြန်းစူးစမ်းခြင်းမရှိဘဲ ကလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်မိသလို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ စိတ်မကောင်းခြင်း နောင်တရခြင်းတွေနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ အစ်ကို လဲကျနေတဲ့နေရာကို သွားရောက်ပြီး သူ့ကို ထူမပေးကာ ၀ီး ချဲပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အနာတရ ပွန်းပဲ့ရာတွေကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော့်ကားထဲမှာ အမြဲပါတတ်တဲ့ ဆေးသေတ္တာလေးကို သွားယူလာပြီး အရက်ပျံနဲ့ဆေးကြောလို့ ဆေးတွေ ထည့်ပေးမိပါတယ်.. ပြီးတော့ အားလုံး အိုကေပြီးဆိုတော့မှ ၀ီးချဲကို လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောပြီးနောက်မှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေ ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်.. တွန်းလှည်းလေးရဲ့ ဘီးကို သူ့အစ်ကိုက လက်တစ်ဖက်နဲ့ တွန်းပြီး လှည့်နေသလို သူ့ညီငယ်လေးဟာလည်း အနောက်ကနေ တွန်းကူပေးနေရင်း လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး တစ်နေရာက သူတို့အိမ်ကလေးရှိရာကို တရွေ့ရွေ့ သွားနေကြတဲ့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တစ်ဆို့ပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်ဟာ အကောင်းစား ဂျာဂွာကားကြီး စီးနေချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ထူမတ်ခြင်းငှာ မစွမ်းသာတဲ့ ၀ီးချဲပေါ်က ကောင်လေးတွေလို မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါသေးလား ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်.. ကိုယ့်ကမ္ဘာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာဘဲ ကျေနပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လူမှုရေး၊ ပရဟိတ ဆိုတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားခဲ့မိပါဘူး။ ပြီးတော့လဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းထိတာနဲ့ ဒေါသတကြီး မစူးစမ်း အဆင်ခြင်ဘဲ စိတ်မြန်လက်မြန် ကိုယ့်ဒေါသကို ဖောက်ခွဲပစ်ဖို့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ပြုလုပ်ဖို့လဲ ၀န်မလေးတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့တာ သိလိုက်ရပါတယ်.
ကျွန်တော့်ကားရှိရာကို ပြန်လျှောက်လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာ လေးကန်ဖင့်နွဲနေခဲ့တယ်.. ကားဆီကိုရောက်တော့ ကွဲနေတဲ့ ကားမှန်ကို တွေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်ပါတယ်.. ဒီကားမှန်ကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ အသစ်ပြန်မလဲတော့ပါဘူး… ဒီမှန်ကွဲနေတာလေးကို မြင်တိုင်း ကျွန်တော် ကားကို ဘယ်တော့မှ အမြန်မမောင်းဖို့၊ အရေးတကြီး အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို မသိလိုက်ဘဲ ကျော်ဖြတ်သွားမိတာမျိုး မဖြစ်အောင် သတိထားနေမိတော့မှာပါ။ ပြီးတော့လဲ ဘယ်တော့မှ မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ဘဲ ဒေါသကို အလျင်စလို မထွက်တတ်အောင်လဲ ဆင်ခြင်ဖို့ အသိတရားတွေ ရလိုက်ပါတယ်.. ကားမရပ်ပေးလို့ အုတ်ခဲနဲ့ပေါက်ပြီး တားရတဲ့ အကူအညီတောင်းရသူတွေရဲ့ အဖြစ်ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး ခံစား နားလည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ ချာတိတ်လေးပေါက်လိုက်တဲ့ အုတ်ခဲဟာ ကျွန်တော့်ကားမှန်ကို ထိရုံသာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော့်ရင်ကိုပါ လာရောက်ထိမှန်တဲ့ အုတ်ခဲတစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအုတ်ခဲနဲ့အတူ ကျွန်တော် သိလိုက်ရတာက လောကမှာ အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေ အများကြီး ရှိနေတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ ဒီလို အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေကို တွေ့ရင် မျက်နှာလွဲပစ်တာမျိုး၊ မသိလိုက် မသိဖာသာ ကျော်သွားတာမျိုး မလုပ်ကြဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမယ် မဟုတ်ပါလားဗျာ။
The brick ( unknown author) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
မာလာငါးပေါင်း၊ အာလူးချဉ်စပ်နဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 14, 2011 Friday, January 14, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့တော့ ဟင်းချက်ပြမဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့နော်.. ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အိမ်ကလေးတွေလိုက်လည်ပြီး သူများချက်ထားတာတွေ ကြည့်ပြီး တံတွေးမြိုမြိုပြီး ပြန်ခဲ့ရလို့ ခုတော့ ကိုယ့်ဟာကို ဟင်းချက်ပါဦးမယ်.. ပထမဦးဆုံးချက်မဲ့ဟင်းက မာလာငါးပေါင်းပါ။ ထွေထွေထူးထူးလဲ မဟုတ်ပါဘူး.. ငါးကို မာလာအနှစ်နဲ့ ရောနှယ်ပြီး ပေါင်းလိုက်တာပါဘဲ။
ဆား၊ ပဲငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ထားတဲ့ငါး
ပထမဦးဆုံး ငါးကို ကြေးခွံဖယ် ဗိုက်ဖောက်၊ ရေများများချိုးပေးပြီး ၊ ဓါးနဲ့ မွန်းပါတယ်.. ပြီးရင်တော့ ဆား၊ အချိုမှုန့်( ဟင်းခတ်မှုန့်) ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင် (သို့) ဆန်အရက် နည်းနည်းတို့နဲ့ နယ်ပြီး အရသာတွေ အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် အချိန်ကြာကြာ ထားလိုက်ပါတယ်..
အဆာပလာ နယ်ထားတယ်၊ စားလို့ ရသေးဘူးနော် အစိမ်းကြီး ရှိသေးတာ
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ဥနီ၊ နံနံတို့ကို အဆင်သင့်ပြင်ပြီး ငါးနဲ့ နယ်ပါမယ်.. အချောင်းကလေးတွေက ဂျင်းနဲ့ ဥနီပါ။ ပြီးတော့ မာလာ အနှစ်နဲ့ ထမင်းစား ၂ဇွန်းလောက်ဘဲ ထည့်ပါတယ်.. အများကြီးဆို တအားစပ်ပြီး ငံမှာ စိုးလို့ပါ.. ငရုပ်သီးစိမ်းတော့ မထည့်တော့ပါဘူး မာလာအနှစ်က စပ်နေပြီးသားမို့ပါ. မွှေးအောင် နှမ်းဆီလေးလည်း နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ နှံ့အောင် နယ်ပါတယ်..
ဒီပုံလေးထဲက မာလာအနှစ်ကို သုံးထားတာပါ။
ပြီးတော့ အိုးတစ်လုံးမှာ ရေထည့် ငါးပန်းကန်ကိုတင်ပြီး ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းပါတယ်.. အဖုံးအုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့... အငွေ့တွေနဲ့ ကျက်အောင်ပေါင်းတာမို့ အဖုံးမဖုံးရင် ကျက်ဖို့ ကြာတတ်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ငါးက ပေါင်းနေရင်း သူ့အရည်တွေ အများကြီးထွက်လာတတ်ပါတယ်.. တစ်ဖက် ကျက်ရင် နောက်တစ်ဖက် လှန်ပေးပါတယ်.. သိပ်မကြာခင်မှာ မာလာငါးပေါင်း ရပါပြီ.
ကျက်သွားရင် ခုလို အရည်တွေက ထွက်လာသေးတယ်လေ။ အစောက ချန်ထားတဲ့ ဥနီနဲ့ နံနံကို ခုလို အပေါ်ကနေ ပြန်ပြီး ဒီလိုလေး လှတပတဖြစ်အောင် စားချင်စဖွယ်လေး ပြန်ထည့်ပါသေးတယ်.. စားလို့လဲ တကယ်ကောင်းတဲ့ မာလာငါးပေါင်းပါ။
နောက်ထပ် ဟင်းတစ်မျိုးက သက်သပ်လွတ် အာလူးချဉ်စပ်ပါ.. ခုတစ်လော ကြားနေတာ ၀က်သား၊ ကြက်သား၊ အမဲသားတွေမှာ Dioxin တွေ တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ အသားမစားတဲ့လူတွေ များနေမှာမို့ အာလူး သက်သပ်လွတ်ချက်နည်းလေး တင်ပေးချင်ပါတယ်နော်.. အဲ Dioxin ပါတယ်ဆိုတာ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ.. မြန်မာနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေ မပါပါဘူး.. အဲဒီမှာနေတဲ့ တစ်ချို့သော သူလေးတွေ ခုတစ်လော အသီးအရွက်တွေ နေ့တိုင်း စားနေကြပါတယ်.. အသီးအရွက်ကို ကြိုက်လို့ မဟုတ်ဘဲ Dioxin ကို ကြောက်လို့ စားနေတာဖြစ်မှာပါ :)
ပထမဦးဆုံး အာလူးကို အခွံနွာပြီး ခုလို ပြားပြားလေးနဲ့ ပါးပါးလေး ဖြစ်အောင်လှီးပါတယ်.. ပြီးရင် ရေစိမ်ထားပါတယ်..
ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ဂျင်း၊ ငရုပ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို အသင့်ပြင်ထားပါတယ်.. စပ်စပ်လေးဖြစ်ချင်ရင် ငရုပ်သီးပိုထည့်နိုင်ပါတယ်..
အိုးထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့် ၊ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းကို ထည့်ပါတယ်. ပြီးတော့ ကြက်သွန်နီနဲ့ အာလူးတွေကိုထည့်၊ ဆား၊ အရသာမှုန့် ၊ ပဲငံပြာရည်နဲ့ အချဉ်အတွက် ရှာလကာရည်(သို့) ဗနီကာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်..
ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ငရုပ်သီးတွေ ပျော့အိကုန်မှာစိုးတာကြောင့် အာလူးကျက်ခါနီးမှ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ငရုပ်သီးကို ထည့်ပါတယ်။ ကော်မှုန့်နည်းနည်းကို ရေအေးနဲ့ဖျော်ပြီး အိုးထဲကိုလောင်းချကာ မွှေပေးပါ။ အာလူးကို စမ်းကြည့်လို့ ကျက်ပြီဆို အပေါ့အငံမြည်းလို့ အနေတော်ရင် ချလို့ရပါပြီ။ အာလူးကို ပျော့ပြဲအောင် ချက်ရင် စားမကောင်းပါ။ ခပ်ဆတ်ဆတ် အနေအထားမှာ ချတာ အာလူးချဉ်စပ်အတွက် စားလို့အကောင်းဆုံးပါ။
နောက်ထပ် ဟင်းတစ်မျိုးက ကျောက်ပွင့်လို့ခေါ်တဲ့ အဖြူရောင် အပွင့်ကြီးတွေပါ။ တရုတ်ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ရှိတတ်ပါတယ်..
သူ့ကို မသုပ်ခင်မှာ ရေစိမ်ထားရပါမယ်.. ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့ ခဏပြုတ်ပါတယ်.. အဖြူရောင်အဆုပ်ကြီးက သို့မှသာ ပွတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ပြီးနောက် အပိုင်းအစသေးသေးလေးများ ဖြစ်အောင် တစ်စီစီ လှီးဖြတ်ပါမယ်... ကြက်သွန်ဖြူ တောက်တောက်စင်းထည့်၊ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး၊ ငရုပ်သီးစိမ်းထည့်၊ အနီရောင်ခရမ်းချဉ်သီး၊ လိမ္မော်ရောင်ဥနီ၊ အစိမ်းရောင်သခွားသီး စတာတွေကို အရောင်လေးတွေစုံအောင်ထည့်ပါတယ်.. ကျောက်ပွင့်က အဖြူရောင်ဆိုတော့ အရောင်လေးတွေ စုံနေတာပါဘဲ။
ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုပ်သီးဆီကြော်(သို့) ဆီကျက်၊ နှမ်းလှော်နဲ့ သံပုရာသီးညှစ်ပြီး နယ်လိုက်ရင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရောင်လှလှ ကျောက်ပွင့်သုပ်ရပါပြီ။
စားသောက်ဖွယ်ရာ မာလာငါး၊ အာလူးချဉ်စပ်၊ ကျောက်ပွင့်သုပ်တို့က ဒီတစ်ပတ် Friday Special ပါရှင်။ လာမဲ့ ရုံးပိတ်ရက်မှာ လုပ်စားချင်သူများအတွက် ပြန်လည် ဝေမျှပါတယ်.. အစားအသောက်များဖြင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ်နှင့် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတံတား
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, January 13, 2011 Thursday, January 13, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Burj al-Arab ဟိုတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ ဟိုတယ် များစွာထဲကမှ ဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ် အကြောင်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ရှင်။ အဲဒီဟိုတယ်က United Arab Emirates မှ ပိုင်ဆိုင်သော ဒူဘိုင်းမြို့ရှိ Burj al-Arab ဇိမ်ခံဟော်တယ် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က ကြယ်ခုနှစ်ပွင့် အဆင့်ရှိ တစ်ခုတည်းသော ဟိုတယ် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. .. ပေပေါင်း ၁၀၅၃ပေ ( မီတာ ၃၂၁) အမြင့်ရှိပြီး တတိယမြောက် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဟိုတယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. ၄င်းဟိုတယ်ဟာ ပါးရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ ကမ်းခြေနဲ့ အနည်းငယ်လှမ်းတဲ့ ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေသုံးပြီး တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ဟိုတယ် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်းဟာလည်း သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်းမဟုတ်ဘဲ လူတွေက မြေဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ ၉၁၉ပေ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကျွန်းအတု ဖြစ်ပါတယ်.. ကမ်းခြေနဲ့ ၂၈၀ မီတာ (၉၂၀ပေ) ကွာဝေးတဲ့ ဟိုတယ်ရှိရာ ကျွန်းကလေးကို သီးသန့်တံတားတစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်ထားရှိပါတယ်..
Burj al-Arab ဟိုတယ်
ဟိုတယ် အဆောက်အအုံကြီး တစ်ခုလုံးဟာ ဘေးနှစ်ဘက်ကို တောင်ပံဖြန့်ထားသော အာရေဗျ သင်္ဘောများရဲ့ ရွက်တိုင်ကြီးသဏ္ဍာန် တည်ရှိပြီး v ပုံစံ အနေအထား အတိုင်းရှိပါတယ်. ဘေးဘက် တောင်ပံနဲ့ အဆောက်အဦးကြား နေရာလွတ်များ ရှိနေပြီး တောင်ပံကို ထူထဲခိုင်ခံ့သော မှန်ပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆန်းပြားလှတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်.. အဆောက်အဦးအဖြစ် စတင်ဆောက်လုပ်ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်း ချကတည်းက စိတ်ချလုံခြုံမှု ရှိစေရန်အတွက် အောက်ခြေ ပေလေးဆယ်အနက်ထိ ကွန်ကရိတိုင်များ ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ရဲ့ အတွင်း အချို့သော အပြင်အဆင်ရဲ့ ၈၀၀၀ စတုန်ရန်းမီတာဟာ ၂၂ကာရက် ရွှေတွေနဲ့ ပြုလုပ်တန်ဆာတင်ထားပြီး ၂၄၀၀၀ စတုရန်းမီတာကတော့ အမျိုး၃၀ကျော်တဲ့ မာဘယ်လ် ကျောက်ပြားများနဲ့ ပြုလုပ်ထားကြောင်း အံ့သြဖွယ်သိရပါတယ်..
ပင်လယ်ရှုခင်းကို လှမ်းမြင်ရတဲ့ အခန်း
နန်းတော်ကြီးတမျှ ခမ်းနားလှပတဲ့ အိပ်ရာ
ဟိုတယ်အတွင်းအောက်ထပ် အဆင့်ဆင့် မြင်ကွင်း
Burj Al Arab ဟိုတယ် စည်းဝေးခန်း
၄င်း Burj al-Arab ဟိုတယ်မှာ သာမန်အခန်းဆိုတာ မရှိဘဲ.. အငယ်ဆုံးအခန်းပင်လျှင် ၁၆၉ စတုန်းရန်းမီတာ ( ၁၈၁၉ စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းပြီး အကြီးဆုံးသော အခန်းမှာ ၇၈၀ စတုရန်းမီတာ ( ၈၃၉၆ စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းပါတယ်. ဈေးအနည်းဆုံး အခန်းပင်လျှင် တစ်ညကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဈေးအကြီးဆုံး အခန်းမှာ တစ်ညလျှင် ဒေါ်လာ တစ်သောင်းခွဲ (၁၅၀၀၀) ကျော် ကျသင့်သောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တည်းခိုနေထိုင်ဖို့ ဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဟိုတယ် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ တင်းနစ်ကွင်းတစ်ခု ပါရှိပြီး ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦးပေါ်မှာ တင်းနစ်ရိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားလိုသူများ သွားရောက် ကစားနိုင်ပါတယ်.. ဟိုတယ်ရဲ့ အောက်ထပ်မှာတော့ ပင်လယ်ရှုခင်းနဲ့ ရေသတ္တ၀ါတွေရဲ့ အလှကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်တဲ့ ပင်လယ်ရေအောက် စားသောက်ဆိုင်ကြီး ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီး ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ တရုတ်ပြည်ရှိ The Qingdao Haiwan Bridge ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး တံတားကြီးဟာ ၂၆.၄ မိုင်ရှည်လျားပြီး ၄နှစ်ကြာမျှ တည်ဆောက်ခဲ့ရကာ စတာလင် ပေါင် ၅.၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်.. မကြာခင်ရောက်လာတော့မဲ့ နှစ်သစ်ကူးမှာ လုပ်သားပြည်သူများ အသုံးပြုဖို့ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်.. ဒီတံတားကြီးဟာ အစောပိုင်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံးတံတားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ လူဝီ စီနီးယား ပြည်နယ်က the Lake Pontchartrain Causeway တံတားကြီးထက်ကို သုံးမိုင် ပိုပြီး ရှည်လျားတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး တံတားသစ် ဖြစ်လာပါတယ်..
ပြည်နယ်၂ခုကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ၁၆၄၈၀၅ မီတာ( ပေ ၅၄၀၇၀၀) အရှည်ရှိတဲ့ တံတားကြီးဟာ ပြည်နယ်နှစ်ခုရဲ့ ခရီးသွားလာချိန်ကို မိနစ် ၃၀ခန့် လျော့ချပစ်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေး ကြပ်ညပ်လွန်းတဲ့ စက်မှုမြို့တော်ကြီး နှစ်ခုဖြစ်သော ရှန်ဟိုင်းနဲ့ နင်းပေါ မြို့ကြီး နှစ်ခုကြားကို ခရီးသွားလာမှု လွယ်ကူအောင် ဖောက်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး တံတားကြီးဟာ ခြောက်လမ်းသွား လမ်းမကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. စီးပွားရေးအရ အရေးပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... တံတားပေါ်မှာ တစ်နာရီကို မိုင်ခြောက်ဆယ်နှုန်း မောင်းနှင်ခွင့် ပြုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်.. တံတားကြီးဟာ အောက်ခံ ကွန်ကရိ ထောက်တိုင် တံတားဖြစ်ပြီး အချို့နေရာမှာတော့ ကြိုးတံတားအဖြစ် နှစ်မျိုးလုံး တွေ့ရပါတယ်..
တံတားကြီးကို ပြည်ပ နည်းပညာ အကူအညီမပါဘဲ တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထဲကအတိုင်း ပြောပါတယ်..း) တံတားကြီးမှာ အခန်းပေါင်း ၅၂၀၀ကျော် ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်တင်တဲ့ အရှည်ဆုံးတံတားကြီး ဖြစ်တာကြောင့် တရုတ်တို့ဟာ အလွန်ဘဲ ဂုဏ်ယူ ၀ံ့ကြွားနေကြပါတယ် ပြီးတော့လည်း ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတံတား ၁၀ ခု စာရင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံက တံတားဟာ ၇နေရာ ပါပြီး ၂ခုတည်းသာ အမေရိကန်မှာ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်.. တစ်ခုကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ၇၉၃၃၂ မီတာ ရှည်တဲ့ Weinan Weihe Grand Bridge တံတားဖြစ်ပါတယ်..
ပင်လယ်ကိုဖြတ်ကာ တံတားဆက်သွယ်ထားသော မြို့ကြီးနှစ်ခု
သုတရစေဖို့ ရှာဖွေ ဘာသာပြန်ပါတယ်ရှင်.. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Sources and photos from